မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Honeymoon to New Zealand: Day1- Adventure to Auckland Begin (A visit to Auckland Tower)
ဗီဇာပြသနာတက်သွားတာကိုသိတယ်..။ boarding pass ပြသနာတက်တာကိုမသိဘူးရယ်..။ဖတ်ရင်းနဲ့တောင်ငိုချင်တယ် ဆက်ဖတ်လိုက်မယ်နော် ။
5/28/2015 2:42 PM
day 1 adventure တော့ပြီးသွားပြီး) ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်..မဗေဒါခရီးသွားပိုစ့်တွေကိုကြိုက်တာတခြားမဟုတ်ဘူး အဲလိုအသေးစိတ်လေးတွေက အစ စုံနေအောင်ပြောတတ်တာရယ်ကြောင့်ပါပဲး) မြို့နာမည်တွေတခါမှမကြားဖူးဘူး သွားတော့သွားချင်တယ်..။
လေယဉ်လက်မှတ်ခ ပြန်ရသွားတာ အတော်ဝမ်းသာစရာပဲ ။ အဆိုးထဲက အကောင်းပေါ့နော် ။ ရှေ့ဆက်မယ့်ခရီးတွေကိုစောင့်နေတယ် မဗေဒါရယ်..။
btw... ၁၈ မျက်နှာ research table ကြီးကိုလည်းတွဲတင်ပါဦးဗျို့ ။
5/28/2015 3:00 PM
A very determined traveller. So cool. :)
I am notakorean fan and notahardcore fan of drama review, but always love your travel related posts.
It's so exciting and I feel like I am traveling by reading the blogpost :P
မဗေဒါ ဘယ်လိုတွန်းအားတွေနဲ့ ဒီလောက် အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်သွားလဲမသိဘူး ။ ညီမတော့ ပထမဆုံး smart ဖုန်းဝယ်မယ်လုပ်တုန်းက pass သက်တမ်းကုန်ခါနီးမုိ့ဝယ်မရဘူး ။ pass တိုးရတယ်..။ pass တိုးပြီးသွားဝယ်တော့ cooperate plan ဆိုရင် ရုံးက စာပါမှရမယ်ဆိုလို့ သောကြာနေ့သွားဝယ်တာ မရပြန်ဘူး စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်စောင့်လိုက်ရသေးတယ် ။ တနလာင်္နေ့ရောက်လို့ ထပ်သွားဝယ်ပြန်တော့ passport သက်တမ်းကုန်ခါနီးမို့ passport သက်တမ်းတိုးပြီးမှဝယ်ပါလို့ပြောကော... M1 ဆိုင်ရှေ့မှာ ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘူး မျက်ရည်တွေထွက်လာတာ...။ သူများတကာတွေ ဖုန်းတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဝယ်နေကြတယ် ငါ့ကျမှ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ ၀မ်းနည်းလို့ ငိုလိုက်တယ်ဆိုတာ..။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ရယ်စရာကြီး ဒါပေမယ့် အဲဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ ကိုယ်ပင်ပန်းတာကိုယ်ပဲသိတယ် ။ မဗေဒါလို လေယဉ်လက်မှတ်တွေထပ်ဝယ် ၊ boarding pass ပြသနာတွေသာတက်ရင်..သေချာတယ်....၀မ်းနည်းလို့ ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေယဉ်လက်မှတ်နောက်တစ်ခုကိုဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တာရယ်ကိုက ကံကောင်းတာပါ..။ ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို နောင်တစ်ချိန်ကျရင်အမှတ်ရနေမှာပါ ။
5/28/2015 3:08 PM
Day 1 တော့ဖတ်သွားပြီ.. ဒီလို ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့လေးရှိတာတောင်မှ အပြုံးနဲ့လေးတွေ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုလို့ .. :) :)
နောက်တစ်ပိုင်း မျှော်နေပါတယ်ရှင့်..
5/28/2015 3:40 PM
ရင်တမမ နဲ့ ဖတ်ပီးပီခုပဲ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ လည်းကောင်း။လက်မှတ်ခပြန်ရတာ လိုက်ပီးဝမ်းသာတယ်။ အစားအစာ တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ဒီဘက်နဲ့တူတူပဲ။ ဟုတ်တယ်နော် ဘယ်ပဲရောက်ရောက် အာရှစာပဲလိုက်ရှာစားတယ်။နောက်တစ်ခုမီးပွိုင် အဲအနီရောင် ပလင်းပလင်းက လည်းတူတူပဲ.အရမ်းကြောင်တယ်။ဟီး။
@ဆုမြတ်မိုး - ဘယ်ထိဖတ်ပြီး မခံစားနိုင်တော့တာလဲ? :P boarding pass ပြဿနာတက်တာကနောက်။ Transit Visa မရှိလို့ ချက်အင်မှာ ပြဿနာတက်တာက အရင်။ ကိုယ်လဲ မြို့နာမည်တွေ သွားမယ်ဆိုမှ ရှာရင်းနဲ့ သိတာ။ တစ်ချို့မြို့တွေဆို အသံမထွက်ဘူး။ ဟိုရောက်မှ သူတို့ထွက်တာကို လိုက်ထွက်တာ။ အဲဒိ အသံထွက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး local ဦးလေးကြီးပြောပြတာတွေရှိသေးတယ်။ နောက်ပိုစ့်တွေမှာ ပါမယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ခပြန်ရတာ အဆိုးထဲက အကောင်းထက်၊ အဆိုးဆုံးထဲက သိပ်မဆိုးတော့တာဆို ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ ဟီး…
၁၈ မျက်နှာ research Table ကြီးက ရှုတ်ပွပြီး သေသေချာချာရေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ပိုစ့်အားလုံးပြီးမှ ဘယ်လိုတင်ရမလဲ နည်းလမ်းရှာရမယ်။ ဘလော့မှာ table ဘယ်လိုတင်ရမလဲ မသိ။ ညီမလို အချိန်တစ်ခုကို စောင့်ပြီးမှ ရမယ်ဆိုရင်တော့ မဗေဒါလဲ ငိုဖြစ်ချင်ငိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခု မဗေဒါတို့အဖြစ်က ထိုင်ငိုနေဖို့ အချိန်တောင်မရဘူးလေ။ တာမီနယ်ပေါင်းစုံပြေးပြီး လေယာဉ်ကို ဘီးဖက်မလိုက်ရရုံတမယ်ဆိုတော့ ရီပဲနေလိုက်တော့တယ် အေးရော။ ခုမှ ၀မ်းနည်းချင်သယောင်ဖြစ်လာဘီ။ ဟီး… ဒါပေမဲ့ ၀မ်းနည်းတာထက် ခံပြင်းတာ၊ မခံချင်ဖြစ်တာက ပိုများတယ်။ “Just bcoz I hold Myanmar Passport, I had to go through all these unfortunate events” ဆိုပြီး ခံပြင်းတာ။ ကိုယ်လဲ သိပ်တော့ ချမ်းသာနေလို့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဖြေရှင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရှိစုမဲ့စု ခြွေးနည်းစာလေးတွေ စုထားတာ လောက်နေလို့ တော်သေးတာပေါ့။
@Anonymous – The comment was under my moderation. So once u submits, it will not be on the blog. It needs to wait for my approval because I want to prevent from spam. Yes, I have two kinds of readers, Drama fans and Travel Fans. But what can I do, since I am fans of both. Haha… Thanks for your comments. I read all of your four comments although they all are the same. I just can’t enough to read my reader’s comment. Next time care to leave your name? I have some plan for my readers.
5/28/2015 4:49 PM
@ဆွေလေးမွန် - မပြုံးလို့လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလာပြီးမှ ဒီလောက် ပိုက်ဆံတွေကုန်ပြီးမှတော့ ကိုယ်စိတ်ညစ်နေရင် ၂ဖူနာဖြစ်သွားမှာပေါ့။ နောက်တစ်ပိုင်းရေးဖို့ မနည်းအားယူရအုံးမယ်။ ဟီး…
@Yumm – ဟုတ်တယ် လက်မှတ်ခ ပြန်မရရင်တော့ ပြန်လာရင် ကိုယ်ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲတော့ မသိဘူး။ ပြန်အမ်းပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ် အစားအစာဈေးက သြစီလိုပဲ။ အာ့ကြောင့် သြစီက သူငယ်ချင်း စလုံးလာတုန်းက အားလုံးကို တန်တယ်ဆိုပြီ အများကြီး ၀ယ်စားတာ။ ဟိ။ မီးပွိုင့်အနီရောင် မှိတ်တုတ်က ကူးလို့ရတယ်ဆိုတာ သြစီမှာလဲ အဲ့တိုင်းပဲလား? အရမ်းကြောင်တယ်ဆိုတာ Yumm လဲ ကြောင်တယ်ပြောတာလား? သူတို့ရဲ့ idea ကြောင်တယ်ပြောတာလား?
5/28/2015 4:54 PM
အင်း အာ့လိုပဲ လူကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တွားတာပြောတာပါ။ သူတို့အိုင်ဒီယာလည်းကြောင်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်စားစရာဆို ဝယ်စားပီးမကုန်နိုင်လို့။
5/28/2015 5:10 PM
I have read it with smile and also long face knowing your exciting and problems moments but whatanice time when two were together. As usual your writing is frank and detail . Love it!! Waiting for the next episodes.
Swe Swe Thant
5/28/2015 7:57 PM
မပြီးသေး ... ဖတ်နေဆဲ။
စိတ်ရှည်ရှည်အသေးစိတ်ကို ရေးထားတာ ...
@Swant - Thank you so much sis. Glad to know readers are actually connected with my feeling through the post. Stay tune for next post.
@ရင်ငြိမ်းသူ - ခုရော ဖတ်လို့ပြီးပြီလား? မန့်သွားတာ ကျေးဇူးပါ.
5/28/2015 10:54 PM
အမလေး ဖတ်ပြီး ရင်တမမဖြစ်လိုက် ဒေါသတွေထွက်လိုက် ညက်လုံးတွေပြူးလိုက် တောက်တွေခတ်လိုက် လက်ခုပ်လက်ဈါးတီးလိုက်နဲ့ အစအဆုံး မုဒ်တွေဝင်သွားတယ် တကယ်
အဲနေ့မသွားရတော့ဘူးမှတ်လို့ ကိုယ့်မှာ ဝမ်းတွေတောင်နည်းလို့ အဟွင့် ရွှတ် ဖတ်
မြန်မာ passport ကတော့ပြောမနေနဲ့ အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ချာရိုက်တာ ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်လို့ များများသာရိုက်
ဘာအခက်အခဲကြုံကြုံ honeymoon ကိုရအောင် enjoy နိုင်တာကိုတော့ တကယ်လေးစားတယ် salute
မဗေဒါခရီးသွားပိုစ့်တွေဖတ်တိုင်း အဲလိုစိတ်လေးကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်နှိုင်းယှဉ်ပြီး မချီးကျူးပဲကို မနေနိုင်တာ reslistic လဲဖြစ်တယ် တချိန်ထဲမှာ optimistic ဖြစ်အောင်လဲ ကိုယ့်mood ကိုယ် control လုပ်နိုင်တာ အားကျတယ် အဟုတ်
Mr right ဗနရာမှာဝင်ပြီးတော့လဲ အော် သူကံကောင်းသဟ ရတဲ့မိန်းမလေးကကျန်းးး ခရီးသွားတာ အားကိုးရသဟ ဂျီလဲမကျဘူး (ကိုယ်နဲ့ယှဉ်ပြီး) research တွေလဲ ရှာတာတော်ဒယ် ကျန်း ဆိုပြီး သဘောတွေကိုကျလို့
ဝိုင်း Jamaica သွားတာလေ မနှစ်က အဲ့တုန်းကလဲ Miami မှာ transit ကိုဝယ်လိုက်တာ သေချာမကြည့်ပဲနဲ့ အာ့ transit visa မလျှောက်မိလို့လေ အွန်လိုင်းချက်ကင်လဲဝင်ရော ဂိရော ဟိုမှာ7years ဝေးနေပြီးပြန်ဆုံမယ့် ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ skype ပြောရင်း မလာဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး ၂ယောက်သားငိုလိုက်ကြတာ ဗြဲ.. လက်မှတ် book ပေးတဲ့ယောကျာ်းခမျာလဲ ကိုယ်ငိုလို့ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ် .. နောက်ဆုံးကျ လက်မှတ်လဲဆုံး Virgin Atlantic ကဟာကို အနားကပ်မှ ဇွတ်ဝယ်တော့ ပိုက်ပိုက်တွေလဲကုန် ဝါးးးး ဗြဲ ရအောင်တော့သွားလိုက်တာပေါ့နော်
အာရှစာမှစားဝင်တာလဲ တူတယ်တော့ ဝိုင်းကဒီမှာနေတော့ပိုဆိုး နေ့တိုင်းနေ့လည်စာထည့်ယူမသွားတတ်တော့ Sandwich တွေ Baguette တွေလဲ လုံးဝကို စားမဝင်တာ တသက်လုံးစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး နေ့တိုင်းငတ်တယ် နေ့လည်စာ
အဝတ်တထည်ကိုယ်တခု မျက်နှာပြောင်လေးနဲ့ Auckland မှာ ကောင်မလေးတယောက် သနားစရာလေးဟယ် အာ့နဲ့ကောမန့်ထိုင်ရေးလိုက်တာ ညတစ်နာရီထိုးနေပြီ မျက်လုံးက ဝါးနေတာ ကီးဘုတ်ကိုမနည်းစမ်းရိုက်နေရတယ် အိပ်တော့မယ်လို့စ် နောက်ဘာဆက်လည်သေးလဲ ဘာတွေဖြစ်သေးလဲ မြန်မြန်ရေးပါ
5/29/2015 7:28 AM
scan လိုကျရော မီးနီပွနတေယျ။
အဲနေရာအေ၇ာက်မှာ ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးရယ်...။ so climax :P
5/29/2015 9:49 AM
Ni Ni Lwin said...
ရင်တမမ နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်နော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်သွားချင်တာကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကို ချီးကျူးပါတယ်။ ကိုယ်သာဆိုရင်တော့ အဲဒီနေရာမှာတွေဝေနေမလား မသိ
5/29/2015 10:56 AM
တော်သေးတယ်။ ပထမ လေယဉ်လက်မှတ်က refund ပြန်ရလို့။ ကိုယ်သာဆိုရင် လဲ အဲ့လို ဆန့်တငင်ငင်ဖြစ်ရင် အတော်စိတ်ညစ်မိမှာပဲ။ btw, ကိုယ်တို့လဲ နေ့တိုင်းဘိုစာ မစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ တရက် ၃နပ်မှာ အနဲဆုံး ၁နပ်တော့ အာရှစာ စားဖြစ်တယ်။ ခရီးတလျှောက် indianဆိုင်မှာ ဒံပေါက်စားခဲ့ရတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဟီးဟီး။
5/29/2015 1:41 PM
I just rode another roller coaster by reading this post! I some point I felt so stressed that I wanted to stop reading. Yet I wanted to know what happened next and spent the longest minute of my life reading it through...thanks God everything was fine and you were able to recover some costs too. I was praying all along until the end. I like how you made the decisions and how you two worked together. Looking forward to reading another episode of your adventure!
5/29/2015 8:15 PM
Whataremarkable honeymoon aye!
5/29/2015 8:34 PM
@Wine ရေ - မတွေ့တာကြာပြီနော်။ မအားတဲ့ကြားက ကွန်မန့်လာရေးသွားလို့ ကျေးဇူးနော်။ မဗေဒါလဲ optimistic ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် Mood ကိုယ်ထိန်းနိုင်တာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုက မခံချင်စိတ်ဖြစ်သွားတာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒိ တစွတ်ထိုးစိတ် အရွဲ့တိုက်တဲ့စိတ်က နေရာတိုင်းတော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်။ Mr.Right က ကံကောင်းတယ်ဆိုရင်။ မဗေဒါလဲ Mr.Right လို နာလည်မှုပေး၊ အလိုလိုက်၊ ခွင့်လွှတ်၊ မဗေဒါသွားသမျှနောက်လိုက်နိုင်၊ ယောင်္ကျားဆိုပြီး အရာရာ ရှေ့က ဆရာမလုပ်ပဲ မဗေဒါလုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုပြီး ခွင့်ပြုတတ်တာ မဗေဒါကို ချစ်လို့လို့ ယူဆလို့ရတော့ မဗေဒါကံကောင်းတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ၂ယောက်လုံးသား စိတ်ဆတ် စိတ်တိုတတ်ရင်တော့ လက်တွဲဖို့ တော်တော်ခက်မယ်။
ဒါဆို ၀ိုင်း Jamaica သွားတဲ့ အဖြစ်ကလဲ မဗေဒါနဲ့ တူတူပဲပေါ့။ အဲ့လိုဆို သိပ်ခံပြင်းတာပဲ။ ကိုယ့်အမှားလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မကောင်းလို့ လိုအပ်ချက်တွေများရတာကို ခံပြင်းတာ။ ဘာပဲပြောပြော သွားလိုက်ရသေးတာကောင်းပါတယ်။ အိပ်ငိုက်ငိုက်နဲ့ ကွန်မန့်ရေးသွားလို့ ကျေးဇူးနော်။
@ဆုမြတ်မိုး - ဒါနဲ့ ၁၈မျက်နှာ research စာရွက်လိပ်ကြီးက Skytower ပေါ်က ပုံမှာ ကိုယ့် အနွေးထည် အိတ်ထဲထည့်ထားတာကြီးပေါ့။
@shin - ဟုတ်ပါ့။ ကိုယ်တွေလဲ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ နဲ့ တရုတ်ဆိုင်တွေ လှည့်ပတ်စားနေတယ်။ လိုကယ် အစားအသောက်ခရီးသွားမဟုတ်ပေမဲ့ ကိုယ်ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေက ကွဲပြားတဲ့ အာရှစာချက်ပုံတွေ အရသာတွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း review နိုင်ပါတယ်။
@Nint Gyi Daw - There's more roller coaster coming. I wonder that at which point did you wanted to stop reading? You can also writeagood comment. Your comment really putasmile on me.
@Willian Tan - Your comment is too short!... haha... ၀တ်ကြေတမ်းကြေ လာပေးနေတာလား? Illegible ဖြစ်ဖို့ လာပေးနေတာလား? haha... (just kidding) keep coming and appreciate it.
5/29/2015 11:35 PM
The point where I wanted to stop reading was when you found out the next available flight costed around $2,500 each. That's very expensive and what worse was it would depart in no time! I knew there would be more impediments until at least you got onto the flight. I was so scared to read another 1 hour and half hours of your journey! That was like the longest one minute of my life reading that part! Your portrayed the whole predicament very well in details! I felt like watchinga4D or maybe 5D movie,a360 degree 3D movie plus seeing your thoughts and knowing your feelings happening inside you! I like how you thought positively even though both of you were left with nothing butaset of clothes! It is only the end of the world until you allow it to be, isn't it?
5/30/2015 12:44 AM
A lot of people have already written all the comments that I want to write!
Btw, I was surprised Auckland has suchalot of high rises lol! I hope kiwis do not find this comment! lol
5/30/2015 1:05 AM
အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တာကိုလည်း ချီးကျူးပါတယ်။။
6/02/2015 2:42 PM
Wow,two thumbs up for ur determaination.
Always enjoy to read ur travelling post as u always share ur happiness ,experience and memories :)
6/03/2015 12:26 AM
auckland က မြို့ထဲလူရှင်းတယ်နော်..
အပိုင်းဆက်လေးတွေ မြန်မြန်ရေးပေးပါဗျိုးးးး
6/12/2015 1:33 AM
I came here to checkanew post! One more entry naw!
6/13/2015 5:33 PM